Du bist hier: Startseite / Aniga oo ah (gabar, 17 jir ah) shalay ayaan cabay khamro. Kadibna wiil...
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2017-09-29 12:41:552017-09-29 12:41:55Aniga oo ah (gabar, 17 jir ah) shalay ayaan cabay khamro. Kadibna wiil saaxiib ah ayaa iga taabtay naasaha, kadibna lugahayga dhexdooda. Anigu ma doonayo in uu i taabto. Laakiin waxba ma dhici karo maadaama ay igu adagtahay in aan arintaasi ka hadlo. Saaxiibadayda gabdhaha ahi waxay dhahaan: midaasi waa waxa kugu dhaca marka aad cabtid khamro. Khalad miyaan ku leeyahay arintaasi?